1. Fanolorana ny tranonkala.
Teo ambany andininy faha-6 ny Lalàna No. 2004-575 avy any 21 2004 Jona ho nomerika matoky ny Toe-karena, dia voafaritry ny mpampiasa tranonkala www.comme-un-pro.fr ny famantarana ny mpandray anjara samihafa amin'ny ampahany amin'ny fampiharana sy ny fanaraha-maso azy:
tompon'andraikitra boky : Tranquillus -tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Ny tompon'andraikitra amin'ny famoahana dia olona voajanahary .
miaramila : WP SERVER SARL, orinasa iray natsangan'ny lalàna frantsay niaraka tamin'ny renivola 10000 €, nifidy domicile tao amin'ny 7 rue de la Cité Foulc 30000 Nîmes, nisoratra anarana tamin'ny RCS of Nîmes tamin'ny isa 808 840 474, laharana VAT FR86808840474, solontenan'ny mpitantana azy ara-dalàna Fabrice Ducarme
2. Ny fepetra ankapobeny ampiasain'ny tranokala sy ny tolotra omena.
Fampiasana ny toerana comme-un-pro.fr dia midika ny fanekena tanteraka ny fepetra sy fepetra voalaza etsy ambany. Ireo fepetra fampiasana dia azo ovaina na ampitaina amin'ny fotoana rehetra, ireo mpampiasa ny tranokala dia asaina hanatona azy ireo matetika.
ny toerana comme-un-pro.fr mampiasa ny fomba rehetra am-pelatanany mba hahazoana antoka ny vaovao azo antoka sy marina araka izay azo atao. Na izany aza, mety hitranga ny lesoka na fanesorana. Ireo mpampiasa Internet dia noho izany dia tsy maintsy miantoka ny maha-marina ny mombamomba azy ireo, izay natao ho an'ny fampahalalana fotsiny, fa tsy feno ary afaka manova na mivoatra tsy misy fampandrenesana.
Comme-un-pro.fr dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fampiasana an'ity vaovao ity, ary mety hiteraka fahavoazana mivantana na indirect izay mety hiteraka.
Cookies : Ny tranokala comme-un-pro.fr dia mety mila mangataka anao hanaiky cookies amin'ny fanaovana doka, statistika ary fampisehoana. Ny cookie dia fampahalalana napetraka ao amin'ny kapila mafy ataonao amin'ny alàlan'ny mpizara ny tranokala notsidihinao ary azo ampiasaina hanarahana anao. Izy io dia mirakitra angon-drakitra marobe izay voatahiry ao amin'ny solosainao ao anaty rakitra an-tsoratra tsotra izay idiran'ny mpizara hamaky sy hitahiry vaovao. Ny ampahany sasany amin'ity tranokala ity dia tsy afaka miasa raha tsy ekena ny cookies.
Raha hamafa ny cookies napetraka ao amin'ny solo-sainanao dia ity ny pejy fampahalalana an'ireo mpizaha-toerana lehibe:
Rohy momba ny Hypertext: Comme-un-pro.fr dia afaka manolotra rohy amin'ny tranokala hafa na loharano hafa hita ao amin'ny Internet. Comme-un-pro.fr dia tsy mamaly na manome antoka ny fisian'ny tranonkala sy loharano ivelany. Tsy azo atao tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana misy zavaboary na inona na inona, afa-po ateraky avy amin'ny tranonkala na ireo loharano, anisan'izany ny vaovao, vokatra na ny tolotra ateriny, na fampiasana izay mety ho ireo singa ireo. Ny loza mifandray amin'ny fampiasana izany dia ho tanteraka amin'ny mpampiasa, izay tsy maintsy manaraka ny fepetra ny fampiasana.
accessiblity: Ny tranokala dia havaozina amin'ny fotoana samihafa amin'ny taona, saingy mety ho tsy azo ampiasaina. Raha mahatsikaritra banga, hadisoana na izay toa tsy mety ianao dia mitatitra izany amin'ny mailaka, amin’ny adiresy tranquillus.france@comme-un-pro.fr, mamariparitra ny olana araka izay azo atao (pejy famoronana olana, karazana solosaina sy tranokala ampiasaina, ...).
Ny votoaty maimaim-poana dia avy amin'ny loza ateraky ny mpampiasa ary eo ambany fahefany. Vokatr'izany, comme-un-pro.fr dia tsy azo raisina ho tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana amin'ny ordinateran'ny mpampiasa na ny fahaverezan'ny data vokatry ny download. Ankoatr'izany, ny mpampiasa ilay tranokala dia manaiky ny fidirana amin'ny tranokala mampiasa fitaovana vao haingana, fa tsy misy viriosy sy mpamily iray vao haingana.
Ny votoatin'ity tranonkala ity comme-un-pro.fr, anisan'izany ny sary, sary, lahatsary, horonan-tsary, horonan-tsary, feo, logos, gifs ary icons ary ny formatation azy ireo no fananana manokana avy amin'ilay tranonkala comme-un-pro.fr afa-tsy ny marika, ny logos na ny votoatin'ny orinasa hafa na ny mpanoratra.
Ny fanerena, ny fizarana, ny fanovana, ny fampifanarahana, ny famerenana ny famindrana na ny famoahana, na ny ampahany, amin'ireo singa ireo dia voarara tsy misy fanekena an-tsoratra comme-un-pro.fr. Io fisehoan-javatra io na fananganana, na inona na inona, na inona na inona, dia manitsakitsaka ny lalàna hosazian'ny Artista L.335-2 ary manaraka ny Fehezan-dalàna momba ny Zo ara-tsaina. Ny tsy fanatanterahana an'io fandrarana io dia fanitsakitsahana izay mety hiteraka sivily sy heloka bevava ataon'ny mpangataka. Ankoatr'izay, ny tompon'ilay votoatin-dahatsoratra natonta dia mety hikomy aminao.
Fanambarana ho an'ny CNIL:
Araka ny 78 17-lalàn 'Janoary 6 1978 (ahitsy amin'ny alalan'ny 2004-801 6 lalàn' Aogositra 2004 momba ny fiarovana ny olona momba ny fanodinana ny tahirin-kevitra manokana) mikasika ny angon-drakitra, rakitra Fahalalahana, ity tranonkala ity dia resaka momba ny fanambarana (laharana 2169132) ho an'ny Vaomieram-pirenena momba ny informatika sy ny fahalalahana (www.cnil.fr).
Amin'ny ankapobeny dia tsy takiana aminao ny hanome anay ny angon-drakitrao manokana rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao.
Na izany aza, ity fitsipika ity dia misy tranga sasany. Eny tokoa, fa ny tolotra sasany natolotry ny ny tranonkala, dia mety ho angatahana mba hanome fanazavana sasany toy ny anaranao, ny asa, orinasa anarana, adiresy mailaka, sy ny nomeraon-telefaoninao. Izany no tranga rehefa mameno ny endrika izay atolotra anao an-tserasera, ao amin'ny fizarana " fifandraisana ".
Na ahoana na ahoana, dia mety mandà tsy hanome ny angona manokana ianao. Amin'ity tranga ity dia tsy ho afaka hampiasa ny serivisy tranonkala ianao, toy ny fampahafantarana vaovao, na fandraisana an-tsoratra vaovao.
Farany, mba hanangona vaovao sasany rehefa avy hatrany amin'ny tsotra Fikarohana eo amin'ny tranonkala, anisan'izany: vaovao momba ny fampiasana ny toerana, toy ny toerana izay vangianao ary inona no fahafahana miditra Services, adiresy IP, ny karazana tranonkalanao, ny fotoana fidinao.
Ny fampahalalana toy izany dia ampiasainay sy ireo mpiara-miasa aminay ho an'ny tanjona dokam-barotra, ny statistika anatiny, mba hanatsarana ny kalitaon'ny serivisy atolotra anao. Ireo tahiry dia arovan'ny voalazan'ny lalàna tamin'ny 1 Jolay 1998, torolàlana momba ny transposing Direction 96/9 tamin'ny 11 martsa 1996 momba ny fiarovana ara-dalàna ireo tahiry.
Araka ny 38 sy ny fanarahana ny 78 17-lalàn 'Janoary 6 1978 mifandray amin'ny tahirin-kevitra, antontan-taratasy sy ny fahalalahana, mpampiasa rehetra dia manana zo fahafahana miditra, rectification, fanafoanana sy ny mpanohitra ho an'ny fampahalalana manokana momba azy.
Mba hampiharana izany zo izany, alefaso ny fangatahanaoomme-un-pro.fr amin'ny mailaka: tranquillus.france@comme-un-pro.fr
Tsy misy fampahalalana manokana momba ny mpampiasa ilay tranokala comme-un-pro.fr dia navoaka tsy nahalala ny mpampiasa, nifanakalo, nafindra, nanendry na nivarotra tamin'ny fanohanana ny antoko fahatelo. Ny fijerin'ny fanavotana ny tranonkala fotsiny comme-un-pro.fr ary ny zony dia hamela ny fampitana izany fampahalalana izany amin'ny mpividy mety ho voafatotry ny adidy nitahiry sy manova ny angon-drakitra momba ny mpampiasa ilay tranonkala. comme-un-pro.fr.
Ireo fepetran'ny tranonkala ankehitriny comme-un-pro.fr dia fehezin'ny lalàna frantsay sy ny misy fifandirana na ny fifandirana mety hitranga avy ny hevitry ny nofy na ny famonoana ho faty ireo no ho fahefana manokana ny Frantsay fitsarana, dia natao manokana fahefana ny mahay kianjan'ny Paris. Ny fiteny ampiasaina amin'ny fametrahana fifandirana dia mety amin'ny teny Frantsay.